ခြဲလျဆီးကစားသမားတှကေ ဒိုငျဗငျထိုးသူတှလေို့ စပါးနညျးပွမျောရငျဟို ဝဖေနျတာက သူ့ကို ဘာမှ မဖွဈစဘေူးလို့ ပွောသှားခဲ့တဲ့ နညျးပွလမျးပတျ – Myan Ball
မျောရငျဟိုရဲ့ ခြဲလျဆီးကစားသမားတှကေ ဒိုငျဗဈထိုးသူတှလေို့ ဝဖေနျခကျြက သူ့အပျေါဘာမှ မဖွဈသှားဘူးလို့ နညျးပွ လမျးပတျက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ စပါးနညျးပွမျောရငျဟိုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက ဘရိုကျတနျအသငျးကို (၂-၁) နဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဟယျရီကနျး ရဲ့ အငွငျးပှားဖှယျ ပငျနယျတီ နဲ့ ပတျသကျပွီး ကာကှယျပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သို့သျောလညျး ခြဲလျဆီးနညျးပွ လမျးပတျက မျောရငျဟိုရဲ့ ဝဖေနျမှုက သူ့အပျေါကို ဘာမှ သကျရောကျမှု မရှိဘူးလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ခြဲလျဆီး နဲ့ စပါး ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလတုနျးက ကာရာဘောငျဖလားပှဲတှဆေုံ့ခဲ့ရာမှာ မျောရငျဟိုရဲ့ အသငျးက လမျးပတျရဲ့ အသငျးကို ပငျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ နိုငျပွီး နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မျောရငျဟိုရဲ့ ဝဖေနျမှုကို လမျးပတျက “ကိနျးလား ? သူ ရှုပျထှေးနတေယျလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ ယူနိုကျတကျကစားသမား၊ မနျစီးတီးကစားသမားတှေ၊ လီဗာပူးလျကစားသမားတှနေဲ့ ခြဲလျဆီးကစားသမားတှေ အကွောငျးကို ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒီရာသီ ကြှနျတျောမွငျရသလောကျ ခြဲလျဆီးအသငျးမှာ ဒိုငျဗဈထိုးတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီပွောဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျော မအံ့သွပါဘူး။ နညျးပွတိုငျးက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဒီလိုတှေ ပွောတတျစိနျချေါတတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒါက ကြှနျတေျာ့ကို ဘာထိခိုကျမှုမှ မရှိပါဘူး” လို့ လမျးပတျက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ခြဲလျဆီးအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ပငျနယျတီ (၈) ကွိမျအထိ ရရှိခဲ့ပမေယျ့ လမျးပတျကတော့ တဈကွိမျမှ ဒိုငျဗငျထိုးခဲ့တာ မပါဘူးလို့ ပွောသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နညျးပွလမျးပတျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပငျနယျတီကနျနကြေ ဂြျောဂငျြဟို (၂) ကွိမျ ဆကျတိုကျ လှဲခြျောခဲ့လို့ တီမိုဝါနာ ကို ကနျစခေဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနျတိုကျစဈမှူးဟာ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ရနျးနကျဈအသငျးကို (၃-ဝ) နဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲ၌ ပငျနယျတီကနေ (၂) လုံးကနျသှငျးခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေက ဒိုင်ဗင်ထိုးသူတွေလို့ စပါးနည်းပြမော်ရင်ဟို ဝေဖန်တာက သူ့ကို ဘာမှ မဖြစ်စေဘူးလို့ ပြောသွားခဲ့တဲ့ နည်းပြလမ်းပတ်
မော်ရင်ဟိုရဲ့ ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေက ဒိုင်ဗစ်ထိုးသူတွေလို့ ဝေဖန်ချက်က သူ့အပေါ်ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူးလို့ နည်းပြ လမ်းပတ်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ စပါးနည်းပြမော်ရင်ဟိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဘရိုက်တန်အသင်းကို (၂-၁) နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဟယ်ရီကန်း ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ပင်နယ်တီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ချဲလ်ဆီးနည်းပြ လမ်းပတ်က မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဝေဖန်မှုက သူ့အပေါ်ကို ဘာမှ သက်ရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စပါး ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက ကာရာဘောင်ဖလားပွဲတွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ အသင်းက လမ်းပတ်ရဲ့ အသင်းကို ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ နိုင်ပြီး နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဝေဖန်မှုကို လမ်းပတ်က “ကိန်းလား ? သူ ရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမား၊ မန်စီးတီးကစားသမားတွေ၊ လီဗာပူးလ်ကစားသမားတွေနဲ့ ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေ အကြောင်းကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီရာသီ ကျွန်တော်မြင်ရသလောက် ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာ ဒိုင်ဗစ်ထိုးတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီပြောဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် မအံ့သြပါဘူး။ နည်းပြတိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒီလိုတွေ ပြောတတ်စိန်ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော့်ကို ဘာထိခိုက်မှုမှ မရှိပါဘူး” လို့ လမ်းပတ်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ပင်နယ်တီ (၈) ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့ပေမယ့် လမ်းပတ်ကတော့ တစ်ကြိမ်မှ ဒိုင်ဗင်ထိုးခဲ့တာ မပါဘူးလို့ ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြလမ်းပတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပင်နယ်တီကန်နေကျ ဂျော်ဂျင်ဟို (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် လွဲချော်ခဲ့လို့ တီမိုဝါနာ ကို ကန်စေခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်တိုက်စစ်မှူးဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ရန်းနက်စ်အသင်းကို (၃-၀) နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲ၌ ပင်နယ်တီကနေ (၂) လုံးကန်သွင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။